Sheekooyinka galmada ay dumarku jecel yihiin in ay raga ka maqlaan ? | shumis.net
Home » galmada » Sheekooyinka galmada ay dumarku jecel yihiin in ay raga ka maqlaan ?
Sheekooyinka galmada ay dumarku jecel yihiin in ay raga ka maqlaan ?
waxaa laga yaabaa inuu ka sheekeeyo inay maanta reer hebel shir la yeesheen oo magtii badh laga daayay, mid yar oo la dakhray ay lacagtii baanta uqaadeen, reerkooda loo magacaabay wasiir, halka reer hebelna agaasime loo magacaabay.Waxaa laga yaabaa inay haweenaydu sheekadan dhibsanayso isna aanu dhaadanayn.
Title: Sheekooyinka galmada ay dumarku jecel yihiin in ay raga ka maqlaan ?